Sammubani, Author at Ibsaa Jireenyaa - Page 71 of 73
Hijaaba Mallatoo Kabajaa-Kutaa 2
May 14, 2016 Sammubani Leave a comment
Miidhaa hijaaba uffachuu dhiisu
Torbaan darbee faaydalee hijaaba eeruf yaalle turre. Hijaabni mallatto kabajaati.
“Yommuu ilmaan namaa Rabbii qofaa bitaman, harqoota gabrummaa fedhii isaani, sheyxaana fi namoota biroo jalaa bahan.” Namni yommuu Rabbiin alaa wanta biraati gabra ta’uu harqoota gabrummaa bilisummaa hin qabne jalatti kufa. Sheyxaanni, fedhiin isaati fi namoonni gabra godhatu. Rabbii qofaa bitamuun bilisummaa dhugaa argachuudha. Namni yommuu Rabbiin qofa gabbaruu gadi fageesse yaada, dhugaa fi sobaa addaan baafata, wanti hunduu isa funduratti ifa ta’a. Read more
May 7, 2016 Sammubani 4 comments
Qananii lakkoofsa hin qabne kan Rabbiin ilma namaa irratti oole keessaa tokko uffatadha. Kaayyoon uffata qaama ilma namaa haguugun ho’a, qorra fi miidha adda addaa irraa eegudha, qaama namaa faayudha. uffanni kan nama faayu fi nama fokkisutu jira. Namni sababa uffataatiin ni kabajama yookiin ni xiqqeefama. Read more
April 30, 2016 Sammubani 13 comments
Kutaa darbee keessatti ibiddi jaalala akkamitti akka jalqabamu ilaalle turre. Insha Allah har’a immoo maloota ittiin qabaneessan ilaalla.
Ibiddi yommuu qabatee balaa geessuf deemu bishaan itti naquun akka dhaamu taasifamaa mitiree? Akka ibiddaa jaalala guutumaan guututti dhaamsu osoo hin ta’in balaa akka hin geessine qabaneessun ni danda’ama. Wanti hubachuu qabnu jaalalli mataan isaa balaa osoo hin ta’in hojii namtichaatu balaa geessa. Namtichi yoo of too’ate balaan jaalalan dhufu hin jiru. Namtichi garuu yoo of too’atu dadhabe akkuma arge ta’ee bu’aa hojii isaa ni dhandhama. Karaa jaalala ittiin too’atan baay’ee isaa barruule qorsa jaalala jettu jalatti kaasne turre. Kan armaan gadii akka dabalataati. Read more
Yeroo ammaa waa’ee jaalala yoo ka’u gariin ni jibbu gariin ni immoo ni jaallatu. Sammuu namoota gariitti jaalala jechuun wanta jibbamaa fi fokkuu waliin wal qabateedha. Sammuu namoota birootti immoo jaalala jechuun walqunnamtii saala qofaan kan wal qabateedha. Jaalalli wanta fokkus miti wal qunnamtii saalaa qofaan kan wal qabates miti. Jaalalli hiika bal’aa kan qabudha. Hiikni isaa garuu nama namaatti ni jijjirama. Read more
Jireenyi ilma namaa guyyaa guyyaatti ni jijjirama. Yookaa badii irraa gara gaaritti yookiin immoo gaarii irraa gara baditti jijjirama. Jireenyi ilma namaa guutu wal fakkaata miti. Garin hiyyeessa, gariin dureessa, gariin gammadaa, gariin aarii fi gaddaan kan haguugameedha. Jireenya keenya guyyaa guyyaan yoo hin haaromsiin yookaa moofe nu jibbisisa yookiin immoo gara baditti ceena. Read more
April 2, 2016 Sammubani 7 comments
Salaanni utubaale Islaama shanan keessa sadarkaa lamaffaa irratti argama. Nama Musliima ta’ee hunda irratti salaata shanan guyyaa guyyaan salaatun dirqama isarra kaa’ameedha. Salaanni burqaa gammachuu fi furtuu milkaa’innaati. Salaanni garmalee jabeefamuun yeroo kamiyyuu dhiifamu akka hin qabne Rabbiin nuu dhaama. Read more
March 26, 2016 Sammubani 7 comments
4.Daraara ummataa Musliima irra gahaa jiru- Bombiin yommuu halkanii guyyaa ummata Musliima irratti roobu, shakkii fi dhama’iinsi nama haguuga. Tokko qabeenyan yoo machaa’u gariin immoo boombii fi beelan dhumu. Gariin baay’iinna qabeenya irraa kan ka’ee haalaa dhabuun daangaa Rabbii darbuu fi ilma namaa cunqursu gariin immoo wanta nyaate uffatu dhaba. Read more
Rakkoon guddaan yeroo ammaa dargaggoota muudataa jiruu dhama’insa fi hurrii jireenyati. Rakkoo keessa isaani jiruu furuuf karaa adda addaatin itti qabsaa’u yookiin immoo itti qabsaa’u dhiisun abdii kutu. Jireenyi addunyaa tanaa qullaa homaa of keessaa hin qabne itti fakkaata. Yaanni maaliif uumame jedhu mataa isaani reeba. Bombiin midiyaa kallatti garagaraatin itti roobu garam akka deemu qaban fundure isaani itti dukkaneessa. Soba dhugaa, dhugaa soba fakkeessun sammuu isaani laamshessa jira. Haqa akka hin hubanne haguuggi itti ta’ee jira. Dargaggoonni garamitti haa goru, maal haa qabadhu, eessa haa deemu, kuni dhugaadha moo soba jedhanii dhama’an lakkoofsi isaani baay’eedha. Jireenya keessatti wantoonni baay’een nama dhamaasu danda’u. Rakkoon nama dhamaasa, hurrii namatti duucha. Read more
March 12, 2016 Sammubani 5 comments
Marii qulqullinna qalbii Insha Allah har’as kunoo itti fufna. Qalbii qulqulleessun naafa keenya qulqulleessu caalaa iddoo qabachuu qaba. Yoo qalbiin tolte haalli namaa hundi tola. Qalbii qulqulleessun nageenya, tasgabbii, gammachuu fi milkaa’innaaf karaa bana. Namni osoo wal jibbuu, wal waanyu, boonu akkamitti gammachuu fi milkaa’inna dhugaa argachuu danda’aa? Bi iznillah har’as qulqullinna qalbii kutaa itti aanuu waliin mari’anna. Read more
Qulqullina Qalbii-Kutaa 3ffaa
March 6, 2016 Sammubani Leave a comment
Insha Allah har’as dhukkuba qalbii fi qoricha ishii itti barbaaduf ni carraaqna. Yommuu namni dhukkuba qaamatin qabamuu ‘Ah, na dhukkube, gara mana yaalaa na geessaa, ogeessa natti barbaadaa…’jedhaa mitiree? Kan dhukkuba qalbiitin qabamee hoo maal jedhinna laata? Yeroo baay’ee dhibeen qalbii namatti hin beeksisu. Gadaa dhaloonni itti bade kanatti dhukkuba qalbii namni ofirratti beeke fayyisuuf carraaqu Insha Allah dhugumatti inni nama qaroo fi milkaa’uf carraaqudha. Jijjirama yeroo jedhamuu ‘Keessaa gara alaati’ moo ‘Alaa gara keessati’? Baay’een keenya jijjirama fiduuf ‘alaa gara keessatti’ carraaqa jirra. Kana jechuun keessa keenya osoo hin jijjiriin alaa fi naannoo keenya jijjiruuf carraaqna. Read more
Kuusaa Select Month February 2021 January 2021 December 2020 November 2020 October 2020 September 2020 August 2020 July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015
Sababa fi Furmaata Waliin Oduu Warra duubatti deebi’anii-kutaa 12.1
Hojii Iimaana Diigu-Kutaa 6
Sababa fi Furmaata waliin Oduu warraa Duubatti Deebi’anii-kutaa 11
Hojii Iimaana Diigu-Kutaa 5
Hojii Iimaana Diigu-Kutaa 4
Sababootaa fi Furmaata Waliin Oduu Warra Duubatti deebi’anii-kutaa 10